Atileetiin Itoophiyaa Alemitu Heroyetti dorgommii km 6tti lammeessoo,Alem Beqqelee ammoo km 8tti 5essoo,atileetiin Eertiraa Birhaanee Afeworqi ammoo km 8 bahe. Naannoleen Itoophiyaalleen dorgommii Guutuu Itoophiyaamagaalaa Baahir Daaritti jalqaanitti dorgomuutti jiran.Oromiyaan dorgommii tanaf atileetota hedduu ergattee haga guddaan moohachuuf abdii qabdi.
Atileetiin Amerikaa Kendel Williamsillee Chaampiyoonaa mana keessaaNCAA Amerikaa kutaa New Meksikootti qopheessite rekordii haaraan moote.Intaltii ganna 19 ta university Joorjiyaa baratttu tun ulee dagalee hedduu haga metirii 60 dheeressanii naqan nama cufa caaltee kuruphattee kuttee rekordii haaraan moote.
Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ingiliiz English Premiere Leaguedorgommii ta eegii jalqabanii torbaan 30essoo keessa jriani Bitootessa 15,qofatti goolii 20 gale. Dorogmmii Bitotootessa 16-tti ammoo Arsenal Tottenham 1-0 moote.Goolii Arsenal Tottenhaamiin moote tana Thoomaas Roskiskiitti daqiiqaa 72-ti keessa buuseef.
← TOKKO SHANEE MOOTUMMAA ABBAA IRREE ITOOPHIYAA HANGA BIYYA ORMAATTI
OMN: QOPHIILEE BITOOTESSA 17, 2014 →